Huancayo • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Ny faritanin'i Huancayo dia any Peru. Io dia iray amin'ireo faritany 9 mandrafitra ny Faritra Junín. Miorina avaratra miaraka amin'ny Faritanin'i Concepción, atsinanana miaraka amin'ny Faritanin'i Satipo, atsimo miaraka amin'ny Faritra Huancavelica ary andrefana miaraka amin'ny Faritanin'i Chupaca. Ny isam-paritany dia manana mponina manodidina ny 545,615 mponina. Ny renivohi-paritany dia ny tanànan'i Huancayo.